Madaxweynaha Kenya oo sheegay inuu mustaqbalka dhow booqasho ku tagi doono Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Labada Madaxweyne ayaa sheegay inay xoojinayaan xiriirka labada dal u dhaxeeya, isla markaana wadaaga waxyaabo badan sida walaaltinimada iyo dhaqanka.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa aqbalay in mustaqbalka dhow inuu booqasho ku yimaado magaalada Muqdisho, isaga iyo Madaxda Urur Goboleedka IGAD, si ay u arkaan horumarka ka jira dalka, sidoo kale ay arkaan xaqiijinta ammaanka iyo xasilinta ka socota Soomaaliya.
Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Soomaaliya ay si dhow ugala shaqeynayaan dhinacyada nabadgelyada iyo ammaanka, waxaana uu xusay in labada dal ay adkeyn doonaan ammaanka xuduuda ay wadaagaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlayay arrinta qaxootiga ayaa sheegay in mabda’ ahaan ay isku waafaqeen in qaxootiga dalkooda ku laabtaan, balse arrintaas loo marayo si nidaamsan oo degenaan leh, isla markaana ku jirin si qasab ah.
War murtiyeedkii laga soo saaray wada hadalada labada Madaxweyne ayaa dhigayay in dib u celinta qaxootiga ay noqoto mid khiyaari ah, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii saddex geesoodka ee Soomaaliya, Kenya iyo Qaramada Midoobey.
Dowladda Kenya ayaa ka soo dabacday go’aankeeda ahaa inay dhamaadka sanadkan ay gebi ahaanba xireyso xerada qaxootiga Dhadhaab, halkaasoo ay ku nool yihiin illaa nus milyan ruux oo qaxooti ah.
Nin la sheegay in uu katirsanaa Ciidanka Dowlada Soomaaliya Ayaa lagu dilay degmada Wabari